Fantaro raha voajirika ny kaonty mailakao noho ny "efa namboarina ve aho?" | Avy amin'ny mac aho
Fantaro raha voajirika ny kaonty mailakao noho ny "efa namboarina ve aho?"
Tsy isalasalana fa mihoatra ny azo atao ny nijaly sasany tamin'ny kaonty mailaka a amboarina na manandrana amboarina. Marina fa sarotra kokoa ho azy ireo ny mahazo ny angon-drakitra misy satria ny ankamaroantsika dia mitandrina kokoa amin'izy ireo, saingy azo atao izany alohan'izay misy ny kaonty mailaka nisy anay Hack ary isika nefa tsy nahalala.
Ity izay tsy hitantsika dia matetika kokoa noho ny eritreritsika na azontsika atao aza ny milaza fa indraindray tara loatra isika, ka anio dia te-hizara aminareo tranonkala iray ahafahantsika mahita raha nisy ny kaontinay. voajirika mandrakizay, antsoina hoe: efa namboarina ve aho?
Nahazo pwned ve aho?
Amin'ny tsindry tsotra dia ho hitantsika ireo tranokala nisy ny fanafihana kaonty mailaka nataonay ary afaka milaza izahay fa tena azo itokisana izy io satria mampiseho ny tranokala nakana azy teo ambanin'ny tranonkala mihitsy aza. Mila mametraka ny kaonty mailaka fotsiny isika ary miandry ny valiny, raha ny amiko dia manana vitsivitsy aho hacks amin'ny toerana izay tena niditra an-tsokosoko ny angona olona an-tapitrisany maro izy ireo: tafiditra ao ny Linkedin sy Dropbox.
Raha vantany vao manana ireo tranonkala voakasik'izany izahay dia tokony hamaha ny olana raha tsy nanao izany teo aloha isika, dia afaka manova ny teny miafina, mamafa ny kaonty na izay heverintsika fa mety. Tsotra be ny fampiasana azy ary tena mahaliana ny mitazona ny kaonty mailaka ho madio amin'ny olana mety hitranga. Ity ny rohy mivantana amin'ny tranokala raha te hahita ny mety ho vokany amin'ny kaonty mailakao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Fantaro raha voajirika ny kaonty mailakao noho ny "efa namboarina ve aho?"
Ny fanambin'ny Andro Tany dia efa azon'ny rehetra
Fanatsarana ny tontolo iainana, manan-danja ao amin'ny tatitra momba ny tontolo iainana Apple